मानसिक तनावले चाया बढी - Health Today Nepal
February 17th, 2020 लेखविचार0comments
अत्यधिक मात्रामा चाया हुने यकिन कारण अझैसम्म थाहा छैन तर रुखो छाला, फंगसप्रति संवेदनशीलता, सेबोरिक डर्मेटाइटिस, फोहोर टाउको, मानसिक तनाव, छालासम्बन्धी रोग, खानपान, लामो समय औषधि वा स्टेराइड सेवन नै अत्यधिक चायाको कारण हुन सक्ने वरिष्ठ छाला रोग विशेषज्ञ डा. धर्मेन्द्र कर्ण बताउँछन् । छाला रुखो, सुक्खा हुनसमेत चाया हुने एउटा प्रमुख कारण हो । रुखो छाला भएकाहरूमा मस्तिष्कको रुखो र मृत छाला पाप्रो बनेर चायाका रूपमा देखिन्छ । जाडो याममा छाला सुक्खा हुनुमा फंगसप्रति संवेदनशीलतासमेत हुन सक्छ ।कान, अनुहार, टाउकाको छाला पहेँलो पात्रोयुक्त बन्ने स्थिति सेबोरिक डर्मेटाइटिस हो । यो समस्याले समेत चाया हुने गर्छ ।
टाउको सफा नराख्दासमेत चाया हुन्छ । टाउको सफा नराख्दा त्यहाँ फोहोर र मृत कोषिका थुप्रिन्छन् । यसले गर्दा टाउकामा चाया बढी मात्रामा देखिन थाल्छ । टाउकामा चाया हुनु शारीरिक मात्र नभएर मानसिक समस्याले समेत हुन सक्छ । मानसिक तनावले चाया बढी मात्रामा देखिन्छ । छालासम्बन्धी रोग एक्जिमा, सोराइसिस आदिले समेत चायाको समस्या बढाउँछ । हामीले खाने आहारसमेत चाया हुने एउटा कारण हो । हाल फास्टफुडलगायतका स्वास्थ्यलाई हानि पु¥याउने खाद्य पदार्थको बढ्दो सेवनसमेत चायाका लागि जिम्मेवार मान्ने गरिन्छ । स्वस्थकर खानपान, ताजा सागसब्जी, फलफूल, पर्याप्त पानी आदिको सेवन नहुँदा चायाको समस्यामा वृद्घि हुने गरेको देखिएको छ ।
लामो समयसम्म वा बढी मात्रामा औषधि र स्टेराइडको सेवनले चायालगायत समस्या उत्पन्न गर्न सक्छ । क्यान्सरको उपचार केमोथेरापी गराइरहेकाहरू, अंग प्रत्यारोपण गराएकाहरू, एचआईभीरएड्स प्रभावितलगायत समेत चायाको समस्याबाट बढी पीडित हुने देखिएको छ ।
यदि तपाईंलाई जाडो याममा सामान्य रूपमा चाया अलि बढी देखिन्छ भने यसको सबैभन्दा राम्रो उपचार कपाललाई नियमित रूपमा सफा गर्नु हो । सातामा दुई–तीन पटक कम रसायन भएको स्याम्पु, साबुन, रिठ्ठा वा सफा पानीले नै कपाल धुने गर्दा टाउकामा चाया पर्ने समस्या कम हुन्छ ।
सुक्खा छालाका कारण हुने चायामा नुहाउनुभन्दा अघि र पछि नरिबलको तेल लगाउनु धेरै फाइदाजनक देखिएको डा. कर्ण बताउँछन् । यसले पनि समस्या समाधान नभए बजारमा पाइने एन्टिडैन्ड्रफ स्याम्पुले नियमित रूपमा कपाल धुँदासमेत चायाको समस्या धेरै हदसम्म हराउँछ । विश्वासिलो कम्पनीको चायाविरुद्घ उपयोग गरिने स्याम्पु फाइदाजनक हुन सक्छ ।
Previous article नर्भिक इन्स्टिच्यूट अफ नर्सिङ्गको दशौ वार्षिकोत्सवमा रक्तदान
Next article पत्रु खानाले बालबालिकामा मोटोपना